ProCure Proton Therapy Center - Proton Therapy any New Jersey
Fepetra fampahalalana maimaim-poana
Fa maninona ProCure
Ny fahasamihafana ProCure
Ny ekipa asanao
Media & Vaovao
Ahoana ny fomba fitsaboana Theron Therapy
Inona no fanafody Proton?
Loha sy ny Hatramin'ny havanana
Tumorika akaikin'ny hazondamosina
Ny tsinay amin'ny base-of-Skull
Diniho ny tobinay
Manolotra consultations virtoaly sy fitsidihana manaraka izahay. kitiho eto mianatra bebe kokoa sa manaova fandaharam-potoana.
Naverina tamin'ny laoniny ny fiainanao
Araraoty amin'ny kansera miaraka amin'ny fitsaboana amin'ny proton amin'ny ProCure
Jereo eto ny valin-teninao
Fantaro ny fahasamihafana ProCure
Ny toeram-pitsaboana farany indrindra napetraka ao amin'ny faritra tri-fanjakana
New Jersey voalohany sy tokana miaraka amin'ny Pencil Beam Scanning
Mpitsabo maherin'ny 5,000 no tsaboina hatramin'ny 2012
Ny ekipa fitsaboana fitsaboana efa zatra indrindra ao amin'ny faritra
MANAO ZAVATRA INDRINDRA MBOLA ARAKA NY FINOANA
Jereo ao anatin'ilay tranokalan'ny firenentsika ary fantaro bebe kokoa momba ny fahasamihafana ProCure.
FIVORIANA-CUTTING-EDGE, ATAOVY NO ATAO
Ny fitsaboana mahomby, voafehy ary voafaritra tsara, dia fitsaboana iray izay mandroso indrindra amin'ny fitsaboana amin'ny homamiadana taratra. Miaraka amin'ny fameperana mazava tsara, ny fitsaboana proton dia manome taratra mivantana ao amin'ny fivontosana ary mijanona, mampihena ny fihanaky ny taratra amin'ny manodidina ny fitrandrahana mahasalama ary manamaivana ny fiatraikany.
MITOMPINA INDRINDRA IZAY HITIAVANA VOALOHANA NY TOKONY?
Ny fitsaboana Proton Therapy dia mahomby amin'ny fitsaboana fitsaboana kansera sy fivontosana maro. Ny fametahana laser toa azy dia mahatonga azy ho fitsaboana mety tsara na dia sarotra be aza ny raharaha, anisan'izany ny fivontosana tsy miangatra, fivontosan'ny tazo, ary ny fivontosana mifanakaiky amin'ireo taova mitsikera.
Aseho ho refa mahomby
Mitrandraka tantara tanjaka sy aingam-panahy avy amin'ny fiaraha-monina misy antsika.
Miboridra Brain Meningioma
Mianara bebe kokoa momba ny fitsaboana proton sy ny ekipan'ny fikarakarana kilasy manerantany. Miaraha aminay hanatrika fotoam-baovao ao amin'ny trano fanavaozana misy antsika. Mifandraisa amin'ny afovoany hamandrihana ny toerana misy anao anio.
Ny ekipa mpikarakara manam-pahaizana anay dia tsy manome ny tsara indrindra amin'ny fitsaboana amin'ny homamiadana, izy ireo ihany koa dia manome ny tsara indrindra amin'ny fahasalamanao ankapobeny. Ny mpitsabo anay dia nanofana tamina andrim-panjakana malaza indrindra teto an-tany, anisan'izany ny Harvard Medical School, MD Anderson ary ny University of Pennsylvania izay manana traikefa fitsaboana be dia be. Avy amin'ny oncologist taratra mankany amin'ny mpitsabo sy oncology momba ny oncolojika, ny ekipanay manontolo dia manolo-tena hanolotra tontolo fiaraha-monina mafana sy mirary izay manatsara ny fahasitrananao.
MANDRITRA NY CANCER PROSTATE AMIN'NY PROTON THERAPY
Miaraka amin'ny siansa mahery vaika amin'ny fitsaboana proton, ny dokotera dia afaka mikendry ny kendrena mazava tsara ary mampihena ny fahasimban'ny sela sy taova salama manodidina azy. Tsy toy ny taratra taratra X-ray mahazatra, anisan'izany i Cyberknife, izay miankina amin'ny fotona hahatratra ny sela mararin'ny homamiadana, ny protons dia mametraka ny taratr'izy ireo mivantana ao amin'ny fivontosana ary mijanona avy eo.
Mangataha hevitra momba ny fitsaboana Proton Therapy Cancer
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fitsaboana proton na hanomana fandaharam-potoana virtoaly, azafady mameno ny taratasy eto ambany ary hisy olona hifandray aminao hamaly ny fanontanianao.
taratra *Ny taratra dia natokanaNy taratra dia tsy nanolorana azy
aretina *Efa voan'ny kansera ahoMbola tsy voan'ny kansera aho
Ahoana no nandre ny momba anay?Vondrona mpiarotakelakaFanolorana ny fiaraha-monina na ny hetsikaNy marary ankehitriny na ankehitrinyNamana na Mpikambana ao amin'ny fianakavianaFamerenan'ny fiantohanaInternetGazety gazetyOtherReferralista mpitsaboTranonkala ProCureonjam-peoVakio lahatsoratra ao amin'ny Gazety, GazetySocial MediaDokambarotra amin'ny fahitalavitraTV NewsVideo
Ny tombony azo avy amin'ny Proton Therapy
Raha misy taratra X-ray mahazatra manala ny taratra manomboka eo am-pototry ny hoditra hatramin'ny faran'ny fivontosana, ny fitsaboana proton dia mametraka ny taratra mivantana ao amin'ny fivontosana nefa tsy mivoaka amin'ny resaka fahasalamana manodidina.
Ny ProCure dia miara-miasa amin'ireo hopitaly lehiben'ny firenena sy ny fikajiana oncolojika hitondrana fitsaboana amin'ny proton ny marary. Our fifandraisana ara-pitsaboana isao ny Memorial Sloan Kettering, Tendrombohitra Sinay, Montefiore, NYU ary Northwell Health.
Fantaro raha toa ka fitsaboana marina ho anao ny fitsaboana proton. Mifandraisa amin'ny ekipan'ny fikarakarana anay na mangataha fampahalalana misimisy amin'ny Internet.
Tombontsoa azo avy amin'ny Proton Therapy vs Radiation mahazatra
Fa maninona no fanafody Proton?
Ahoana no fiasan'ny Proton Therapy?
Ny fomba fitsaboana
Dokotera sy mpiasa
Ny sarany sy ny sarotra
Miaraka amin'ny fitsaboana
Fampahalalana momba ny faharetana vaovao: (877) 967-7628
toeram-pitsaboana: (732) 357-2623
Fitsaboana fandaharam-potoana: (732) 357-2654
Hetsika amin'ny orinasa: 8:00 maraina - 5.00 hariva EST
Ny famolavolana tranonkala sy ny fampandrosoana amin'ny Prager Creative
Mifandraisa amin'ny ekipa fikarakarana anay amin'ny (877) 967-7628